I-Spring Red®-i-Hangzhou Spring Biotechnology Manufacturer & Supplier
I-Spring RedR- cantaxantina-egg yolk ibalulekile
Kutheni ukusebenzisa i-canthaxanthin?
I-Canthaxanthin ixhaphake kwiibhaktheriya, i-algae, i-crustaceans kunye nezinambuzane, ezinye iintlanzi kunye neentaka zifumaneka kubukho bayo, kwaye ngezi zidalwa zingena kwikhonkco lokutya.
Iqanda leqanda kunye nombala wesikhumba se-broiler yinkqubo yendalo, i-canthaxanthin yenye yezona zinto zibalulekileyo zombala.
Iinkukhu azikwazi ukwenza i-canthaxanthin ngokwayo, kodwa kwinkqubo yendaleko yokufumana i-canthaxanthin
ngokuthe ngcembe babe ukusuka ekutyeni kwaye zifakwe esikhumbeni kunye namafutha kwisikhundla.
Isakhiwo sekhemikhali seCanthaxanthin
INOMBOLO YECAS .: 514-78-3
Ubunzima beMolekyuli: 564.8
I-Carotenoids, i-arhente yombala esebenzayo kakhulu
unsaturated yellow ukuya kwibala elibomvu
Iimpawu ze-Spring Red
Ithunyelwa nge-5-10tons ngenyanga
Ngokusekwe kumgangatho obalaseleyo kunye nokusebenza ngokugqibeleleyo kombala, iNtwasahlobo ebomvu (iCanthaxanthin) iyathandeka ngakumbi nangakumbi yabathengi abathembekileyo.Nokufikelela kwi-10tons kwinyanga ethile.
I-spring ebomvu (i-canthaxanthin) i-powder particle isetyenziswe ngeteknoloji ephakamileyo yeeleyile ezimbini ezifakwe.
I-molecular ye-Canthaxanthin ephathwa yi-antioxidant stabilization processing yafakwa kwi-matrix yesakhiwo sothungelwano, kwaye ke indawo ye-matrix yokugqoka i-starch kunye ne-round, i-compact, i-particle efanayo, ukuqinisekisa ukuzinza kwayo ukugcina.
Inani elikhulu lovavanyo olukhawulezileyo lubonise intwasahlobo ebomvu kunye nokuzinza okulungileyo ngokwayo, njengokugcina iintsuku ezili-180 phantsi kwe-40 ℃ izinga lokugcinwa kwe-canthaxanthin lisengaphezulu kwe-90%, elilingana nemveliso yodidi lwehlabathi, ephezulu kakhulu kuneemveliso zasekhaya ezifanayo.Ngaphantsi kweemeko ezifanayo zokulinga, imveliso yasekhaya igcina iintsuku ezingama-180, izinga lokugcinwa liyi-60% kuphela ngaphezulu.
Intwasahlobo ebomvu (i-canthaxanthin 10%) i-particle ngokwayo inozinzo oluhle, ngaphezu koko yenza ngcono kwisondlo sangempela.
imveliso, inokumelana nokuba ezinye izithako kwiminerali kunye ne-vitamin premix ukutshabalalisa kunye nokumelana nobubi
Uzinzo lwedatha yovavanyo lubonise ukuba i-Spring ebomvu kwi-mineral premix nayo inozinzo oluhle, olungcono kuneemveliso ezifanayo ekhaya nakwamanye amazwe.
3. Ipropathi efanelekileyo yombala
Ngokusebenzisa amaziko ovavanyo azimeleyo (iYunivesithi yaseBonn, eJamani), imifuniselo yezilwanyana yabonisa ukuba iNtwasahlobo ebomvu yayine-bioavailability ephezulu kwizilwanyana, isakhono esigqibeleleyo sombala.
Ukusebenza kungaphezulu lee kunezinye iimveliso zasekhaya ezifanayo, nokuba ngcono kunesakhono esihle sombala wokhuphiswano lwangaphandle.Ngomlinganiselo omncinci weNtwasahlobo ebomvu kwi-poultry premix, i-yolk yeqanda kunye nesikhumba kukuphumeza umbala ofunekayo.
Umbala womthubi weqanda utshintshile njengoko usondla la masuntswana ecanthaxanthin
4. I-bioavailability ephezulu
I-Spring pink yenza kakuhle ukunyibilika kwamanzi afudumeleyo 35-40 ℃ kwaye yenze i-latex ecacileyo necacileyo.
Kuyo ubungakanani bamasuntswana malunga ne-200-300nm, kwaye kuya kuba luncedo ukufunxa kwecanthaxanthin kwindlela yezilwanyana zesisu.ukuphucula i-bioavailability yayo.
Ubomvu bentwasahlobo bunomxholo ophezulu we-canthaxanthin yonke.Ikwaphucula i-bioavailability ye-spring ebomvu kunye nesiphumo esingcono sombala.
Izinto ezahlukeneyo, ii-premixes, iipowders, iigranules kunye ne-ejenti zokudumba kwishishini le-thefeed, zifuna ukuba i-canthaxanthin ingabi lula ukufunxa ukufuma kunye ne-caking, kodwa ukuba nokuhamba kakuhle kunye nokulula ukongeza kunye nobukhulu obufanayo, i-Spring red inalo lonke uphawu lomgubo wayo otshisiweyo. amasuntswana.
I-Spring-Spring inamasuntswana afanayo, i-avareji yobungakanani be-particle malunga ne-240μm, xa kuthelekiswa nabakhuphisana bangaphandle,
ukuhanjiswa ubungakanani amasuntswana, amasuntswana ebomvu Spring kusasaza emxinwa kwaye kulula ukuxuba kwi feed.
Ukhuseleko olulungileyo, "HAYI" intsalela ye-solvent
Ikhonkco lonikezelo lwe-GMP lonke elinesatifikethi se-FAMI-QS.
Umgangatho wemveliso bubomi bethu bokuqinisekisa ukulandeleka kwayo.
Ngaphezu koko, ukhuseleko lwayo, ukuhambelana kwayo kunye nokuthembeka kwayo.
Imigangatho emi-5 yekhadibhodi, emdaka,
iimpawu zokuthumela njengesicelo.
20kgs/ctn: 1 ipakethi okanye 4 ipakethe
Iibhokisi ze-20 kwi-pallet elungiswe yifilimu yeplastiki
5kgs/pack okanye 20kgs/pack.
i-erecta (Lutein)kwizinto zokutya
Umbala weqanda lomthubi uhlelwe yi-Roche color fan (RYCF)
Ingcebiso yeDosi (mg/kg feed) Ukuhanjiswa kwemibala ye-yolk yenkukhu ezondliwa ngedidithi ezongeziweyo nge-CANTHAXANTHIN 10 PCT
ICurcumin Piperine Capsules Astaxanthin Beadlet Amacwecwe eCurcumin Piperine ICurcumin Astaxanthin Powder ICurcumin yeTurmeric